विनयको जीवनको अर्काे एउटा ‘संयोग’ ! – YesKathmandu.com
विनयको जीवनको अर्काे एउटा ‘संयोग’ !
बिहीबार ०८, असार २०७४
समयले कस्लाई कहाँबाट कहाँ पु¥याँउछ के थाहा ? त्यसैले त संसारमा सबैभन्दा शक्तिसाली मानिन्छ ‘समय’ । कुनै समय थियो पूर्व युवराज पारस शाहको चकचकी थियो । समयले उनलाई यसरी हुत्यायो उनी राजाको पुत्रबाट सर्वसाधरण नागरिकमा बलदिए ।
पूर्व युवराज पारस शाहको झै उच्च खानदान नभए पनि केही कमी थिएन विनयजंग बस्नेतको बाल्यकालमा पनि । महालेखा परिक्षकको कर्मचारी पिता सडक दुर्घटनामा परी बितेसँगै विनय कुलतको नशामा फस्दै गए । उनी यसरी कुलतमा डुबे कि सोही कारण श्रीमती र छोरीले छाडेर हिडेपछि हाल पूर्व युवराज पारस शाहकै नियति भोग्न पुगे । अर्थात नितान्त एक्लो । साथीहरुको संगतमा चोभारमा रहेको रिचमण्ड रिह्याव सेन्टरमा पुगे । तीन महिनाको बसाई पछि उनी आफू मात्र सुध्रिएनन् । अरुलाई पनि सुर्धान कम्मर कस्सेर लागे ।
यो बीचमा उनले ‘एक्सन फर सोसल चेन्ज’ नामक संस्था दर्ता गराए । ‘एक सोचले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्छ,यी वेवारिसे भनिएकाहरुको अब हामी हुनुपर्छ’ भन्ने उदेश्य बोकेर संस्थाले हालसम्म एक सयभन्दा बढी वेवारिसेहरुको औषधोपचार गर्दै आएको छ । यो बीचमा विभिन्न अस्पतालमा रहेका ५० भन्दा बढी वेवारिसे लाशहरुको सदगत विनयकै संस्थाले गरेको छ ।
सो लाशको सदगद् गर्ने अर्थात वेवारिसेहरुको औषधोपचार गर्ने खर्च भने विनयले विभिन्न इष्टमित्र साथीसंगिसँग ऋण सापटी मागेर जुटाँउछन ।
हाल तिनै वेवारिसेहरुको उद्धारका लागि ललितपुरको लामाटार पुर्नजीवन केन्द्र खोल्नमा सक्रिय उनै विनय र पूर्व युवराज पारस शाहबीच संयोगले भेट भएको छ ।
उक्त भेटमा विनय र सो संस्थाको कामको खुलेरै उनले प्रंशशा गरेका छन । विनय भन्छन ‘पहिला देखि नै भेट्न मन थियोृ संयोगले भेटने अवसर जुर्यो । धेरै नबोल्ने लजालु स्वभावका र सदैव हासिरहने पूर्व युवराज शाहको पनि सामाजिक कर्ममा रुची रहेको पाए विनयले ।
दुव्र्यसनी रोक्नका लागि आफू पनि इच्छुक रहेको पारसले सुनाए ।
अहिले उनै विनय ललितपुरको लामाटारमा बेसाहराहरुको आश्रम सञ्चालन गर्दैछन । उक्त आश्रमका सल्लाहकार लालबहादुर मर्हजन र सञ्चालक रिकभरी नेपालका संस्थापक विजय कुमार पाण्डे लगायत छन । साढे २ रोपनी जग्गा,एक तल्ले घर भाडामा लिएर निर्मित उक्त आश्रममा सुरुमा २० जना वेवारिसेहरु राख्ने संस्थाको योजना रहेको विनयले सुनाए । क्षमता पछाडि विस्तार गर्दै लैजाने संस्थाको योजना छ ।
आश्रमलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ,लपु महानगरपालिकाको मेयर चिरिबाबु मर्हजन लगायतको समर्थन छ ।
विशुद्ध सामाजिक कर्ममा उहाँहरुबाट सदैव साथ र सहयोगको आश संस्थाले राखेको छ ।
सबै सामाजिक कार्यमा एकज्ुट भएर लागेको खण्डमा समाज परिवर्तन सम्भव हुने विनयको ठहर छ ।
साउदी अरब पुगेका १७ युवा म्यानपावरको ठगीमा परी बेपत्ता
एन्फाका पूर्व महासचिव लोकबहादुर शाही करोड ठगिको आरोपमा पक्राउ
उपराष्ट्रपति पुनद्वारा पार्टी परित्याग
राहत लिएर अनेरास्ववियुको टोली बाढी प्रभावित सप्तरी पुग्यो
‘मानव अधिकारविरोधी घटनाप्रति सरकार संवेदनशील भएन’
सत्या र हिसिलाले निम्त्याएको संकट
राज्यकोषबाट पूर्वविशिष्टलाई मनग्ये सुविधा दिइने
सिटौला जंगिएपछि संस्थापनका नेता निवासबाट निस्किए
आज ११ बजे व्यवस्थापिका संसदको बैठक
पत्रकार माथि भएको आक्रमणको भत्सना
अमरसिंह पुनलाई लक्षित गरेर बम प्रहार
१७ सय घर डुबानमा, एकको मृत्यु – एक बेपत्ता
देउवालाई कानुन व्यवसायीले किन पत्याएनन् ?
बम राखिएको भन्दै फोन आएपछि सर्वोच्चमा त्रास, सबै इजलास प्रभावित
मोरङमा एमालेका लालबाबु पण्डितलाई सुरुवाती अग्रता
सल्यानमा कारवाहीको होडवाजी, कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरु निसानामा